ICT for Myanmar: September 2012
How to solve Shh/Updater-B False positives error in Sophos Endpoint Secutiry and Control?
အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ error မျိုး သင့် ရဲ့ Sophos မှာ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် သင့် Sophos Anti-Virus က Virus Detect ဆိုပြီး Shh/Updater-B ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ Alert တွေတရစပ်ပြနေရင် အောက်ပါ အဆင့်များအတိုင်းဖြေရှင်းပါ။
တကယ်က Virus မဟုတ်ပါဘူး။ Sophos ရဲ့ Auto Update လုပ်တဲ့ File ကို မှားပြီး Virus အဖြစ်သတ်မှတ်တာပါ။
- Sophos Endpoint Security and Control ကို Launch လုပ်ပြီး Live Protecion ကို On ထားပါ။ ပုံမှာ ပြထားပါတယ်။
Error ဖြစ်နေတဲ့ စက်တွေရဲက အောက်ပါ Location များတွင် javab-jd.ide ဖိုင် ရှိမရှိ စစ်ပါ။ ရှိနေတယ်ဆိုရင် latest update ဖြစ်နေပါတယ်။ မရှိနေရင် update လုပ်ပါ။
32-bit: C:\_Program Files\_Sophos\_Sophos Anti-virus\_
64-bit: C:\_Program Files (x86)\_Sophos\_Sophos Anti-virus\_
- Sophos Anti-Virus Policy ရဲ့ On Access Scanning မှာ Windows Exclusions ကို အောက်ပါအတိုင်း ထည့်ပေးပါ။
C:\_Program Files (x86)\_Sophos\_
"Exclude remote files" ဆိုတာလေးကို check လုပ်ပေးပါ။
ပြီးရင် Sophos Control Center or Console ကိုသွားပြီး Update Now လုပ်ပါ။
Update လုပ်လို့ Error မတက်ခဲ့ဘူးဆိုရင် သင့် Sophos ပြဿနာ ပြေလည်ပါပြီ။
မပြေလည်သေးပဲ 'Unexpected error' ဆိုပြီး error ပေါ်လာမယ်ဆိုရင် အောက်ပါ Link ကိုသွားပြီး Zip file ကို download လုပ်ပါ။
ရလာတဲ့ File ကို C: အောက်မှာ unzip လုပ်ပါ။ Run As Administrator နဲ့ Run ပါ။
ပြီးလျှင် Sophos ကို Update ပြန်လုပ်ပါ။ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
ယခင် Anti-Virus မှ Qurantine လုပ်ထားတဲ့ Alert တွေကို ရှင်းဖို့ အောက်ပါ Link ကိုသွားပါ။
Text များကို Copy လုပ်ပြီး Notepad ထဲသို့ Paste ပါ။ .bat file format ဖြင့် save လုပ်ပါ။ Run As Administrator ဖြင့် Run ပါ။
ကဲ... သင့်ရဲ့ Sophos Error အားလုံး အဆင်ပြေပါပြီ။
ဒီဖြေရှင်းနည်းက Sophos Endpoint Secutiry and Control အတွက်ပါ။
တခြား Sophos Products တွေ နဲ့ ဒီနည်းကိုပဲ အသေးစိတ်သိချင်ရင် အောက်ပါ လင့်များမှာသွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
(Be knowlegeable, pass it on then)
How to reset forgotten Lotus Notes User's ID Password?
တခါ တခါ Lotus Notes Client Customer တွေဆီက request လုပ်လေ့ရှိတတ်တာကတော့ သူတို့ရဲ့ ID Password မေ့သွားလို့ reset လုပ်ခိုင်းတာပါပဲ။
Lotus Notes Client ID password ကို reset လုပ်ပုံလေးကို အောက်မှာ အဆင့်လေးတွေနဲ့ ပြပေးထားပါတယ်။
- ပထမဆုံး Password Reset လုပ်ချင်တဲ့ User ရဲ့ Lotus Notes ID file ကို ကူးယူထားပါ။
- Domino Server ကို Log In ဝင်ပါ။
- Lotus Domino Administrator ကို Run ပါ။
- Configuration Tab ကို Click လုပ်ပြီး Extract Recovery Password... ဆိုတာကို ရွေးပေးပါ။
- Admin password တောင်းတဲ့ windows ပေါ်လာပါမယ်။ password ထည့်ပြီး Log in လုပ်ပါ။
- မိမိ reset လုပ်ချင်တဲ့ user ရဲ့ ID file ကို ရွေးပေးပြီး Open ကို နှိပ်ပါ။ ( ပထမဆုံး ကူးယူထားသော ID file ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
- User ID အတွက် recovery password ကို generate လုပ်ပေးထားတဲ့ Windows ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ မှတ်သားထားပြီး OK နှိပ်ပါ။
Domino Server ဖက်အခြမ်းတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်များ ပြီးပါပြီ။ Password Reset လုပ်ရန် Request လုပ်ထားသော User အသုံးပြုသော Computer ဆီသို့သွားပါ။
- Lotus Notes ကို Run ပါ။
- Lotus Notes ပွင့်လာလျှင် Exit ကို ပြန်နှိပ်ပါ။
- Options Windows ပေါ်လာပါမယ်။ Try to recover your password ဆိုတာကို ရွေးပေးပြီး OK နှိပ်ပါ။
- Domino Server မှ Generate လုပ်ပေးထားသော Recovery password ကို ထည့်သွင်းပါ။ Enter နှိပ်ပါ။
- User ID file ကိုရွေးပေးပါ။ Open နှိပ်ပါ။
- Change Password Windows ပေါ်လာပါမယ်။ User အား စိတ်ကြိုက် Password ထည့်သွင်းခိုင်းပါ။
Lotus Notes Client User ID password reset ပြုလုပ်ခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။
တကယ်တော့ Domino Server ပေါ်မှာ ID Vault ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ပြီးသားရှိခဲ့လျှင် အထက်ပါ အဆင့်များလုပ်စရာ မလိုပါဘူး။
ID Vault ထဲက သက်ဆိုင်ရာ User ID ကို ကူးပြီး ID file overwrite လုပ်ပေးလိုက်လျှင် ပထမဆုံး Account create လုပ်စဉ်က Password နှင့် log in ဝင်နိုင်ပါတယ်။
Email control by google apps unable to send out in Outlook 2010
ဒီနေ့ ကြုံရတဲ့ အတွေ့အကြံုလေး ဝေမျှချင်ပါတယ်။
Customer တယောက်ရဲ့ email က receive ရတယ် send မရဘူးဖြစ်နေတာပါ။
Company Domain ကို SingTel ရဲ့ Onenote Office Service ယူပြီး သုံးတာပါ။
Google apps ကို သုံးတယ်ပေါ့ဗျာ။
ဒါနဲ့ Outlook ကို ဖွင့်စစ်တယ်ပေါ့... Gmail က Provide လုပ်ထားတဲ့ incoming/outgoing server and port တွေ အကုန်မှန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် email မထွက်ဘူး...
ဘာကြောင့်လဲပေါ့... error message ကို စစ်တော့ Network Security Device က Block ထားတာ ဒါမှမဟုတ် ISP က Block ထားတာတဲ့။
ဒါနဲ့ ပထမဆုံး သေချာအောင် Web Mail ရမရ စစ်တယ်။ ရတယ်။
POP or IMAP setting တွေကို Gmail ဖက်မှာ Enable လုပ်ထားလား စစ်တယ်။ လုပ်ထားတယ်။
SMTP connection မှာ SSL ကို enable လုပ်ထားလား စစ်တယ်။ လုပ်ထားတယ်။
Username , password မှန်လားစစ်တယ်။ မှန်တယ်။
ရှိသမျှ Configuration , setting တွေ မှန်မမှန်စစ်ပါတယ်။ အားလုံး ကွက်တိ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် email send မရသေးပါဘူး။
Firewall ကို စစ်ပါတယ်။ SMTP Port တွေကို Block လုပ်မထားပါဘူး။
ဒါနဲ့ Telnet ကိုဖွင့် ပြီး smtp.gmail.com 587 ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ကြည့်ပါတယ်။
"220 mx.google.com ESMTP q3sm12794179oef.0" ဆိုတာလေး ပေါ်လာပါတယ်။ သေချာပြီ SMTP port 587 နဲ့ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
တကယ်က အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင် ဘာစာသားမှ ပေါ်မလာပဲ နေရမှာပါ။
ဒါနဲ့ ISP ကို ဖုန်းဆက်တော့မှပဲ... SMTP ကို 465 ပေးခိုင်းပါတယ်။
587 ကနေ 465 ကို ပြောင်းပြီး send လုပ်ကြည့်ပါတယ်။ မရသေးပါဘူး။
နောက်ဆုံး နည်းလမ်းကို သုံးရတော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ပါပြီ။
ပြဿနာတက်နေတဲ့ Profile ကို Remove လုပ်ပြီး Profile အသစ်ဆောက်ပေးလိုက်တော့မှ အားလုံး အဆင်ပြေသွားပါတယ်။
တကယ်က Profile ကြောင်သွားတာပါ။ Port 465 / 587 တွေကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ 465 က SSL ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ရွေးပေးရပြီး 587 က TLS ကို သုံးမယ်ဆိုရင် ရွေးပေးရတာပါ။
ကဲ...ကြံုလာတဲ့အခါ ဒီနည်းလေးက အသုံးတည့်မှာပါ။